भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउन नहुने ८ कारण - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउन नहुने ८ कारण
फेब्रुअरी १४ अर्थात भ्यालेन्टाइन्स डे । यो दिनलाई मायाँ ब्यक्त गर्ने दिनकोरुपमा नेपालमा प्रणय दिवस पनि भनिन्छ । मानिसहरु यो दिनमा प्रेम ब्यक्त गर्ने गर्छन् त्यसका लागि फरक फरक स्थानमा जोडीहरुको भिड नै लाग्छ । तर जसले प्रेम सच्चा अर्थमा नै गर्छ उसको लागि भ्यालेन्टाइन्स डे को आवश्यकता पर्दैन । यहाँ तपाइँले भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउन नहुने ८ कारणबारे चर्चा गरिएको छ ।
पुलिसको खतरा भ्यलेन्टाइन्स डे मा तपाइँ एकान्त खोज्दै कतै जानु हुन्छ । तर पुलिसलाई भने भ्यालेन्टाइन्स डेमा तपाइँ जस्तै जोडीले कतिबेला एकान्तमा गएर उनीहरुकै शब्दमा आपत्तिजनक ब्यवहार गर्छन् भन्ने पर्खाइ हुन्छ । तपाइँ प्रेमी वा प्रेमिकालाई चुम्दै गरेको समयमा पक्राउ पनि पर्न सक्नु हुन्छ । सके सम्म यस्ता डेटिङ भ्यालेन्टाइन्स डे भन्दा अन्य दिनमा गर्नुस् ।
२ पैसाको सर्वनाश भ्यालेन्टाइन्स डे मा रेष्टुरेन्ट होटल वा रिसोर्ट चलाउनेहरुका लागि दशैं नै हो । अन्य दिन १०० रुपैयाँ पर्ने चिजलाई यो दिन ५०० रुपैयाँ पार्न सक्छन् उनीहरु । खानेकुरा देखि बस्ने ठाउँ सम्मको चार्ज भ्यालेन्टाइन्स डेकै लागि आकाशिएको हुन्छ । तपाइँ प्रेमी वा प्रेमिकासँग यस्तो ठाउँमा जानु भो भने अर्को समस्या पैसा घटाउन आग्रह गर्न समेत अफ्ठेरो मान्ने अवस्थामा हुनु हुन्छ । पैसा जोगाउन चाहनु हुन्छ भने भ्यालेन्टाइन्स डे बाहेक अरु दिन नै खोज्नुस् प्रेम गर्नको लागि ।
३ फूलको मूल्य भ्यालेनन्टाइन्स डेमा सबै भन्दा बढी विक्री हुने कुरा हो फूल । मानिसहरु प्रेम ब्यक्त गर्न फूल किन्छन् । तर भ्यालेन्टाइन्स डे फूल किन्नेका लागि भने सबै भन्दा गलत दिन हो । यो दिन फूल किन्नेले अरु दिन फुलसँगै खाजा खान पुग्ने पैसा फूलको लागि मात्र हाल्नु पर्छ । एक पटक सोंच्नुस् यति महंगो प्रेम गर्ने कि नगर्ने ।
४ मोटो हुनबाट बँच्नुस् भ्यालेन्टाइन्स डेमा डेटिङ गएपछि तपाइँ चकलेट देखि केक सम्मका फ्याटी फुडबाट बँच्ने मौका पाउनु हुन्न । तर यस्ता खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिदैनन् र मोटोपन बढाउन कारक मानिन्छन् ।
५ लाइन बस्नु पर्छ भ्यालेन्टाइन्स डे मा रेष्टुरेन्ट होटल, रिसोर्ट, पार्क सम्म पनि भिडम भिड हुन्छ । पहिले देखि नै भ्यालेन्टाइन्स डे स्किमका कारण छोइनसक्नु महंगो पनि । यस्ता ठाउँमा गएर लाइन बस्नु भन्दा प्रेम गर्ने साइत अरु नै जुराउनुस् ।
६ भिडबाट अलग भ्यालेन्टाइन्स डै मा सबै जना फेसबुक स्ट्याटस देखि हरेक कुरामा भ्यालेन्टाइन्स डे मय बनेका हुन्छन् । तपाइँ यो दिन फरक बन्न सक्नु हुन्छ । तपाइँलाई १४ फेब्रुअरी बाहेक वर्षमा अरु दिन पनि छ नि प्रेम गर्नका लागि ।
७ आमा बाबुको आँखामा हेर्नुस् बाबुको मुख हेर्ने दिन आयो । आमाको मुख हेर्ने दिन पनि गयो । तपाइँले सामान्यरुपमा मनाउनु भयो । तर भ्यालेन्टाइन्स डे मा भने भए नभएको पैसा खर्च गरेर अनेक हर्कत किन गर्नु हुन्छ ? एक पटक आमा बाबुको आँखामा हेर्नुस् प्रेमी वा प्रेमिकालाई जस्तै एक दिन मायाँ दिनुस् ।
८ प्रेम एक दिनमा मात्र ब्यक्त हुन्छ? मानिसहरु भ्यालेन्सटाइन्स डेका लागि मरिहत्ते गर्छन् मानौ प्रेम गर्नका लागि अरु दिन नै छैन । खासमा भ्यालेन्टान्स डे मा मात्र अभिब्यक्त हुने प्रेम झुठो हुन सम्भावना प्रवल हुन्छ । प्रेम त जीवन भरीका लागि हो । किन एक दिन मात्र ? भ्यालेन्टाइन्स डेलाई वर्षमा एक मात्र प्रेम ब्यक्त गर्ने दिनकोरुपमा नमान्नुस् ।
सुरुङ्गा (झापा), २५ जेठ - झापाको दमक नगरपालिकामा धारिलो हतियार प्रहार गरी बुधबार साँझ एक बालिकाको हत्या भएको […]
जनजाति महासंघद्धारा आन्दोलनको घोषणा, यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले सांस्कृतिक पर्वमा दिंदै आएको बिदा कटौती गर्ने […]
सार्वजनिक यातायात चढ्दै हुनुहुन्छ ? अब उपत्यकाका १० स्थानमा नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । तपाईँ सार्वजनिक यातायात चढ्दै हुनुहुन्छ ? चढ्दै हुनुहुन्छ भने अब दौडादौड गर्नुपर्दैन, लाम बसेर […]
पाकिस्तानले आउँदा साता पाँच सय दोषी आतङ्कवादीलाई मृत्युदण्ड दिने
इस्लामाबाद, पाकिस्तानले आउँदा साता करिब पाँच सय दोषी आतङ्कवादीलाई मृत्युदण्ड दिइने जानकारी अधिकारीहरूले […]
आज त्रिपक्षीय वार्ता, के होला?
मंसिर १४ । काठमाडौं, सरकारले मधेसको समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र आन्दोलनरत […]
इबोला भाइरसबाट सतर्कता अपनाउन अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल आउन नदिने
साउन ३१ । काठमाडौं,इबोला भाइरसबाट सतर्कता अपनाउन सरकारले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने […]